Madaxweynaha oo ka qeyb galay Xuska Maalintii la qoray Farta Soomaaliga | Sagal Radio Services
Madaxweynaha oo ka qeyb galay Xuska Maalintii la qoray Farta Soomaaliga
Madaxweynaha Dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta Muqdisho uga qeyb galay Munaasabad lagu Maamuusayo markii la qoray Farta Soomaaliga oo ah 21-ka Janaayo 1973-dii iyadoo ay ka soo Wareegatay 43 Sano.
Munaasabada ayaa waxaa Madaxweynaha kala qeyb galay Mas’uuliyiin ka tirsan Lbada Gole ee Dowladda,Aqoonyahano iyo Dad waayo u joog u ahaa Xilligii la qoray Farta Soomaaliga.
Qaar ka mid ah Wasiiradii ka qeyb galay Xafladda lagu Xusayay Markii la qoray Farta Soomaaliga oo lagu qabtay Xarunta Akadeemiyada Cilmiga Fanka iyo Suugaanta ayaa sheegay in Xukumadda Soomaaliya ay door muhiim ah ka qaadan doonto soo nooleynta iyo Isticmaalka Afka Soomaaliga si Ummadda Soomaaliyeed ay u fahmaan Muhiimadda uu leeyahay Afkeena.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhankiisa sheegay in Ummad walba lagu garto Luuqadeeda ayna ku faanto islamarkaana Shacabka Soomaaliyeed laga doonayo in ay ku Faanaan Afkooda iyo Adeegsiga Qoraalkiisa.
Sanad walba markii la gaaro maanta oo kale ayaa laga Xusaa Soomaaliya markii la qoray Farta Soomaaliga oo aheyd 21-kii Janaayo Sanadkii 1973-dii.
Tags Farta Maalinta Soomaaliga Xuska